Gurigaaga oo ay la Wareegaan Ururka Mulkiilayasha Guryaha | LawHelp Minnesota
Gurigaaga oo ay la Wareegaan Ururka Mulkiilayasha Guryaha
Losing Your Home to your Homeowner’s Association (PDF)341.43 KB
Haddii aad dib ula dhacdo qiimaynta gurigaagga ay ku sameynayso Ururuka Dadka Guryaha Iska leh, ururku waa kaala wareegi karaa guriga!!
Dhab ahaan maxay tahay ‘qiimaynta” dadka guryaha leh?
Marka aad iibsatid guri dhisme weyn ka mid ah, ama guryaha isku qabsan ka mid ah, waxaad ku biiraysaa Ururka dadka Guryaha iska leh “HOA”. Waxaa kaloo jira guryo gooni u taagan oo deris ah oo samaysta Ururka Dadka Guryaha leh, laakiin kuwaasi ma badna. Waxaa jira lacag bil kasta la iska qaado si aad xubin uga noqoto. Waxaa kaloo jira waxyaabo kale oo ay tahay in aad bixiso iyo waajibaad soo baxa oo xisaabtaada lagu daro. Lacagahaas aad bil walba bixinaysid, iyo kharajka kale waa “qiimaynta”. Taas waxaa lagu qeexaa Sharciyada Rasmiga ah ee HOA, oo inta badan lagu siiyo marka aad guriga iibsatid. Baaqaas rasmiga ah ee Ururka HOA inta badan waa dukumeeti dadweyne. Waxaad nuqul waydiisan kartaa maamulka shirkadda ee degmada uu ku yaal gurigaagu.
Haddii aan sharciyadu sheegayn wax ka duwan, kharajyada soo socda waxay qayb ka yihiin “qiimaynta” ee aad siiso Ururka HOA:
Kharaj bil walba ah, ama “lagugu leeyahay”
Kharajka shaqo socod siinta iyo adeegyada. Kuwaan waxaa ka mid ah: kharajka caymiska, ama kharajka xaaqidda barafka ama jarridda cawska.
Kharjka macquul ah ee waraaqaha Ururka HOA, sida diridda warbixinta qiimayn aan la bixin, sawir ka qaadista diiwaanka Ururka HOA.
Qiimaynta bishiiba waxaa kaloo ka mid ah:
Kharajka la daahidda.
Ganaaxyada la xiriira jebinta heshiisyada sharciyada rasmiga ah, xeer hoosaadyada, iyo sharciyada Ururka HOA. Waa in Ururka HOA ay ku siisyaa ogaysiin iyo fursad in lagu dhegaysto.
Dul saarka biiray la daahidda lacagaha ururka.
Isku day in aad xaliso wixi aan la bixin ee ku saabsan qiimaynta sida ugu dhaqsa badan!
Waa in aad isku daydaa in aad xaliso arrimaha dib u dhacay ka hor inta aan Ururka HOA uusan xisaabtaada u gudbin garyaqaanka Ururka HOA. Marka ay taasi dhacdo, kharajkaagu kor ayuu u kacayaa.
Waxaad xaq u leedahay in aad weydiisato war bixin qoraal ah oo muujinaysa waxa aan la bixin ee qiimaynta ka mid ah iyo inta ay le’eg tahay. Ururka HOA waxay haysataa 10 maalmood in ay ku siiso warbixintaaas.
Haddii aadan ogolayn tirada ama sababta wax kasta oo ka mid ah qiimaynta, weydii Ururka HOA in ay kuu sharaxaan hab raaca ay u mareen waxa lagugu soo dalacay si aad dooda dhinacaaga ah u diyaarsatid. Waxaa laga yaabaa in aad macluumaadka ka heli kartid dharciyada rasmiga ah ama sharci hoosaadka, ama sharciyada iyo xeerarka. Waxaa laga yaabaa in ay noqoto dhagaysi ama hab raac racfaan.
Haddii aad weli diidantahay ka dib marka dhegaysiga iyo racfaanku dhacay, waxaa kuu furan lab fursadood oo aad samayn kartid marka xigta.
Hadii aad haysid lacagta aad ku bixin lahayd lacagata ay kuu sheeganayaan in aad qabto, waa in aad bixisaa. Laakiin marka aad bixiso, u dir warbixin qoraal ah oo aad ku sheegayso in aadan ku raacsnayn kharajka lagu saaray. Markaas ka dib waxaad Ururka HOA ka dacweyn kartaa maxkamadda maslaxaadda, si lacagtaadii aad dib ugu heli lahayd. Si aad u hesho macluumaad siyaado ah ee ku saabsan maxkamadda, akhri Xogta Urursan Conciliation Court (Maxkamaddaha Madaniga Ah).
Haddii aadan wada hayn kharajka oo dhamaystiran oo ay Ururka HOA kugu sheeganayaan, laakiin aad iska ilaalinayso in wax walba ka sii xumaadaan, oo hadan aad bixinaysid kharajka sharci yaqaanka, isku day in aad la gaarto Ururka HOA ama maamulka shirkadda heshiis dib u bixin (dib u gudid) ah. Haddii aad la gaartid heshiiska dib u gudidda intii muddo ah, qoraal kala qaata! Ha ogolaan wax aadan awoodi Karin.
Ururka HOA wuxuu kaa qaadi karaa tallaabo lid ku ah wixii aadan bixin ee qiimaynta ka mid ah
Markaad iibsatay guriga, waxaad heshiis kula gashay Ururka HOA in aad raacdo sharciyadooda. Tan waxaa ka mid ah in aad waqti go’an ku bixiso waxii lagugu leeyahay. Haddii aad bixin weydo Ururka HOA way kugu dacweyn karaan jebinta heshiiska. Waxay isku dayayaan in ay lacagta ku helaan xukun maxkamadeed oo lid kugu ah. Fiiri Xogta Urursan, What to do if You Are Sued (maxaad samaysaa haddii lagu dacweeyo)
Marka u horeysa ee qiimayntaadu ay dib u dhacdo, Ururka HOA waxay si toos ah wax ugu yeelanaysaa gurigaaga. Wax yeelashadu waa “xuquuq” lagu yeeshay guriga. Wax ku lahaantaasi waxay jiraysaa illaa laga bixiyo lacagta lagu leeyahay. Wax ku lahaanshahaasi ma aha in la diiwaan geliyay, laakiin inta badan Ururka HOA waxuu wax ku lahaanshaha ka diiwaan geliyaa xafiiska degmada ee gurgia laga diiwaan geliyay. Tani waxay ka dhigaysaa diiwaan dadweyne, waxayna ka ilaalinaysaa in aadan guriga gadin illaa aad bixiso.
Marba haddii ay jiro rahmad, Ururka HOA waa la wareegi karaa gurigaaga. Waa muhiim in aad ogsoon tahay haddii Ururka HOA ay guriga wax ku sheegtaan in ay kugu dacweyn karaan jebinta heshiiska aad la gashay. LAAKIIN haddii Ururka HOA ay go’aan ku gaarto in ay guriga kaala wareegto waa in ay baabi’iyaan dacwad kasta oo lid kugu ahayd, ama ay muujiyaan in xukun kasta oo ay horay ugu guulaysteen in aan waxba lagu soo ururin. Sidaas darteed, Ururka HOA kuma dacweyn karaan, lacag kaama qaadi karaan, hadana isla markaa ma samayn karaan la wareegid.
Maxaa dhici kara marka Ururka HOA ay go’aan ku gaaraan in ay guriga la wareegto?
Ururka HOA wuxuu samayn karaa la wareegid asagoo isticmaalaya maxkamadaha (La awareegid xukun Maxkamadeed) ama la wareegid maxkamad la’aan (xukun la’aan). Haddii ay doortaan maxkamad la’aan), waxay keliya u baahan yihiin in ay wargeyska ku daabacaan adigana ku ogaysiin toos ah ku siiyaan. Labada jeerba Ururka HOA waa in uu raacaa sharciyada iyo hab raaca uu bangigu raaci lahaa marka uu la wareegayo guri uu amaah rasmi ah ku bixiyay.
Taas micneheedu waxa weeye waxaad haysataa 6 bilood oo ah “xilliga dib u helidda”, oo aad bixin kartid wixii lagugu lahaa gurigana aad haysan kartid.
Ama, waxaad ku gadi kartaa guriga xilliga lagu jiro dib u hellidda wax ku fillan in aad ku bixin kartid waxa Ururka HOA ay kugu leedahay, aadan ku bixin kartid waxii amaah ahaa ee guriga lagu lahaa. Wixii intaas ka soo hara adigaa iska leh.
Guriga waad ku noolaan kartaa inta lagu jiro 6da bilood ee xilliga dib u helidda guriga, laakiin Ururka HOA wuxuu xaq u leeyahay in ay kiro ku saarto, haddii taas u ogoshahay xeer hoosaadka HOA.
Haddii aadan gaarsiin herkii ay joogtay waxa aad ka qabtid Ururka HOA, ama aadan gadin guriga, waa in aad guriga ka baxdaa marka uu dhamaado xilliga dib u helidda. Marka uu dhamaado xilliga dib u helidda, guriga waxaa iska leh Ururka HOA. Waxay kugu dacweyn karaan in guriga lagaa saaro. In aad hesho cid guri kaa ijaarta adigoo guri si khasab ah lagaaga soo saary waa wax aad iyo aad u adag, marka waxa ugu fiican waxa weeye in aad guriga ka baxdo ka hor 6da bilood inta aysan dhamaan.
Wixii macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan sida la wareegidda gurigu u shaqayso, fiiri xogta xogta urursan Your Rights in Foreclosure (xuquuqda la warrgidda guriga).
HOA way la wareegi karaan, waana la wareegayaan, inta lagu jiro xaladda deg-degga ah ee cudurka safmarka ah ee COVID. Ma jiraan wax sharciyo ah ee la meel mariyay oo joojinaya taas inta lagu jiro COVID. Waa laga joojin karaa Ururka HOA in ay guriga kaa saaraan ka dib marka ay guriga la wareegaan haddii uu jiro go’an lagu joojinayo ama dib loogu dhigayo arrintaas. Tag halka COVID-related mortgage page (Bogga la xiriira amaahda guryaha xilliga COVID) e halak www.LawHelpMN.org wixii macluumaad dheeraad ah.
Kharajyada HOA iyo qiimaynta waxay buuxiyaan shuruudaha lagu helo in lacag lagaa bixiyo. Arji codsi
Ma sii wadi karra in aan bixiyo amaahdii guriga?
Haddii aad qabitd amaahda asaasiga ah oo cusub ee guriga markii ay Ururka HOA ay la yimaadeen la wareegaan guriga, waxaad u baahantahay in aad go’aan ka gaartid in aad sii wadid bixinta amaahda.
Haddii aad u malaynaysid in aad haysatid fursad wanaagsan oo aad ku bixin kartid qiimaynta Ururka HOA inta lagu jiro xilliga dib u helidda, markaas waa in aad sii waddaa bixinta amaahda guriga.
Haddii aad ogtahay in aadan bixin Karin qiimaynta Ururka HOA, gurigana aadan dib u soo ceshan Karin, ka fikir sidii aad u joojin lahayd dib u bixinta amaahda, oo lacagtaas u dhaqaalaysan lahayd si aa ugu guurto. Bixin la’aanta amaahda, waxay saamayn aan wanaagsanay ku leedahay mudnaanta ay leedahay in wax lagu amaahiyo si la mid ah saamaynta la wareegidda guriga.
Ogaysiinta u dmabaysa ee dhibta ay leedahay kharajka garyaqaanka
Marka ay tahay la wareegid bangi oo “caadi ah” ee amaah guri, bankigu wuxuu kugu kordhin karaa waxoogaa kharjaka garyaqaanka ah ee la xiriirta la wareegidda guriga.
La wareegid guri ee Ururka HOA oo aan ahayn xukun maxkamadeed, ma laha xad inta garyaqaanku ku dalaci karo cidda guriga iska leh. Xadidaad kasta waxay ku qorantahay xeer hoosaadka ururka HOA iyo bayaankooda, inta bandan ma laha wax xad ah. Haddii ururka HOA go’aansado in uu isticmaalo kula wareegid xukun maxkamadeed ( oo inta badan aan dhicin) kharajka garyaqaanka waxaa fiiriya xaakimka.
Taas micneheedu waxa weeye haddii Ururka HOA go’aansado in garyaqaankoodu uu qabanayo howsha wax ku lahaansha iyo la wareegidda guriga, garyaqaanku wuxuu ku dalici karaa kharjkii uu doono.
Kharajka garyaqaanka oo dhan addiga ayaa lagu saarayaa adoo ah qofka guriga iska leh, ee lama saarayo Ururka HOA. Haddii aad isku daydo in aad siiso Ururka HOA waxa ay kugu leeyihiin si aad gurigaaga u haysatid, kharajku aad iyo aad ayuu uga sii badanayaa marka loo sii “gudbiyo” garyaqaanka Ururka HOA. Tani waxay jirtaa ka hor inta aan la gaddin guriga, iyo inta lagu jiro xilliga dib u helidda guriga.
Kharajka aan xadka lahayn ee garyaqaanka waxay ka dhigaysiga wax addag in la helo caawimo sharci, xitaa caawimo sharci oo lacag la’aan ah. Xitaa haddii aad u xaq u leedahay gargaar sharci yaqaan, kuma caawimi karto waayo waxay kor u sii qaadaysaa kharajka garyaqaanka Uruka HOA.
Wixii ka dambeeya marka Ururka HOA ay galka dacwada u wareejiyaan garyaqaankooda, garyaqaankaagu waxa keliya ee uu la hadli karaa waa garyaqaankooda, lama hadlayo Ururka HOA, ama maamulka shirkadda HOA. Garyaqaanka wuxuu soo dalacanayaa telefoon, fakis, iyo warqad kasta iwm. Kharajyadaasi addiga ayaa lagu saarayaa. Inta badan waxaa wanaagasan kana jaban in aad si toos ah kala shaqayso gudiga ama maamulka shirkadda HOA qorshe dib u bixin ka hor inta aan loo gudbin galka dacwada garyaqaanka HOA.